Madaxweyne Donald Trump oo qorsheynayey weeraro ka dhan ah dalka Iiraan. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Donald Trump oo qorsheynayey weeraro ka dhan ah dalka Iiraan.
Madaxweyne Donald Trump oo qorsheynayey weeraro ka dhan ah dalka Iiraan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku fakaray in uu weeraro goobta ugu weyn ee nukliyeerka Iran isbuucii la soo dhaafay laakiin ugu dambeyntii wuxuu go’aansaday inuusan qaadin tallaabadan. ”Sidaasi waxa yiri sarkaal Mareykan ah.
Trump ayaa codsaday codsigan intii lagu guda jiray kulan uu khamiistii la yeeshay kaaliyeyaashiisa ugu sareeyay amniga qaranka, oo ay ku jiraan madaxweyne ku xigeenka Mike Pence, ku simaha xoghayaha cusub ee gaashaandhigga Christopher Miller, iyo General Mark Milley, gudoomiyaha taliyaasha wadajirka ah.
Sarkaalka ayaa xaqiijiyay mar uu la hadlaatey Wargeyska The New York Times, in la-taliyayaashu ay ka dhaadhiciyeen Trump inuusan ku dhaqaaqin wareer lagu qaadi Iiran sabab too ah ah halista isku dhac ballaaran.
Aqalka Cad ayaa diiday in uu ka bixiyo wax faalo ah Arintaan,Trump wuxuu waxuu qaatay afarti sano ee madaxweynenimadiisa inuu kujiro siyaasad gardarro ah oo ka dhan ah Iran, isaga oo ka baxay nukliyeerka Iran.
Previous articleDowlada jabuuti ka hadashay Colaada Dalka Itoobiya.
Next articleDowlada Itoobiya oo Duqeymo cirka ah ka fulisay Caasimada Tigray ee Waqooyiga Dalkaasi isla markaana diiday baaqyada dhexdhexaadinta.